IMILAB W12: jiri ohere nkwalite mmachi nke smartwatch a na -atọ ụtọ | Androidsis
Onye rụpụtara IMILAB akwadola mwepụta nke W12, smartwatch ọhụrụ nwere nnukwu ike nke na-abịa ịsọ mpi megide smartwatches ndị ọzọ n'ahịa. IMILAB W12 Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ngwaọrụ na -ekele nkwa nhazi ya ime ebe na ọnụ ahịa asọmpi n'etiti ọtụtụ ndị asọmpi.
N'ime nkọwa ya, elekere ọhụrụ na-abịa na ihuenyo 1,32-inch dị mkpa, ọkpụkpọ doro anya ma na-ekwe nkwa nnwere onwe dị mma n'ihi batrị agụnyere. IMILAB W12 bụkwa mgbaaka egwuregwu nwere nnukwu nguzogide IP68 (mgbochi mmiri), mana na -achịkwa oke obi na awa ụra.
Na echiche mbụ ọ dị ka elekere elekere anya ndụ, mana ozugbo o gosipụtara ihu ya, enwere ike ịhụ elekere mara mma yana nhọrọ ya niile. IMILAB W12 nwere nhọrọ niile, yana nnwere onwe nke ruru ụbọchị azụmahịa 30 n'iji eme ihe.
Ị chọrọ inweta W12 n'ọnụ ahịa kacha mma? Ugbu a ị nwere ike nweta site na ịpị ebe a na iji koodu mgbasa ozi IMILABWW12
1 Ọdịdị mara mma na -eguzogide
2 Akụrụngwa IMILAB W12
3 Batrị ga -adịgide ruo ụbọchị 14 n'ihu
4 Nyocha data yana ihe ruru egwuregwu 13
5 Nguzogide mmiri, ọkọ na ájá
Ọdịdị mara mma na -eguzogide
IMILAB W12 na -egosi ọmarịcha ihe nlele mbụ, ebe ọ na -eguzogide. Emepụtara elekere ka ọ na -arụ ọrụ n'ọnọdụ ọ bụla, na nke a ọ na -eme na ọ na -eme ya na ọnọdụ okpomọkụ na -agbanwe agbanwe, ma ọ na -ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi, yana na -eguzogide mmiri na uzuzu.
Eriri ahụ dabara na ọkpụkpọ okirikiri kpochapụwo, ọ na -egosi bọtịnụ anụ ahụ abụọ n'akụkụ aka nri, otu n'elu na otu na ala. Enwere oghere n'etiti nko eriri, a na -ejikọta ya na njedebe ya site na nko nke na -egosi iguzogide ndị jerks nwere ike.
Ọzọkwa, ọgbọ ọhụrụ a smartwatch nwere ọtụtụ eriri na agba dị iche iche ewezuga agba ojii nke ndụ niile. Enwere ike ịnweta ụda uhie na acha anụnụ anụnụ, na-ejikọ ya na uwe kwa ụbọchị, ihe ga-eme ka ọ dabara na oge niile.
Akụrụngwa IMILAB W12
N'ime nkọwa ya, IMILAB W12 na -ejikọ nchekwa 128 GB, ezu maka iji ụbọchị eme ihe na inwe ike ịchekwa ozi dị mkpa. Site na ịnweta ozi ekwentị kwa ụbọchị dị mfe, ọ na -echekwa ihe niile metụtara egwuregwu a na -eme kwa ụbọchị, yana data teknụzụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ịnweta menus ọ bụla na -adị ngwa, yana ihe nrụpụta n'ime nke na -egosi arụmọrụ na usoro niile a na -arịọ kwa ụbọchị. Ewezuga ihe niile na -egosi obere oriri ka ike gwụcha opekempe mgbe ị na -agba ngwa na ụdịdị dị iche iche ejiri.
Ihe mmetụta arụnyere na-arụ ọrụ nke ọma, enwere ike nyochaa ọnọdụ nke ọzụzụ a ozugbo, na -elele data ndị a weere dị ka ihe dị mkpa. Enwere ike ịhọrọ ọkpụkpọ ozugbo ị wepụtara ya na igbe, na -egosipụta ozi dị mkpa, oge, usoro na ihe ndị ọzọ.
Batrị ga -adịgide ruo ụbọchị 14 n'ihu
Onye nrụpụta IMILAB ahọrọla ịwụnye batrị nwere ikike dị elu, ịbụ 330 mAh na nke ga -adịru ngụkọta ụbọchị iri atọ nke ọrụ njikere. N'ihi obere oriri nke ihe mmetụta ya, ọ gaghị agabiga ibu na -aga n'ihu, nke na -enye ya ohere ịrụ ọrụ na nkwojiaka.
Ogologo ndụ dị ka eji ya eme ihe ruru ụbọchị iri na anọ, ha niile na -eji njikọ njikọta iji jikọta ngwaọrụ ọ bụla nwere sistemụ gam akporo na iOS. Batrị agụnyere a ga -edobe ụdị ya na okirikiri ụgwọ dị ka ọ dịkwa na ekwentị mkpanaaka ugbu a.
Nyocha data yana ihe ruru egwuregwu 13
IMILAB W12 gụnyere ngụkọta nke ụdị egwuregwu 13, gụnyere nke a na -ahụkarị, na -aga n'ihu na -atụle nha, kalori furu efu na nkọwa ndị ọzọ, yana ịgba ọsọ na ụdị ụzọ iri na otu ndị ọzọ. Ọnọdụ ọzọ bụ ịgba ígwè, zuru oke ma ọ bụrụ na ị na -emekarị ụzọ ịnyịnya ígwè n'obodo ma ọ bụ n'ime ime obodo.
W12 agbakwụnyela ọrụ nleba anya ikuku oxygen ọbara ọhụrụ, nke nwere ike nyochaa mgbanwe ikuku oxygen ọbara 24 awa n'ụbọchị Ị nwere ike ịlele data ikuku oxygen akụkọ ihe mere eme na elekere n'oge ọ bụla iji jide mgbanwe ahụ.
Ọrụ ndị ọzọ arụnyere bụ ịtụ ụra, ọ ga -egosi gị ozi ziri ezi gbasara oge izu ike na nke adịghị. IMILAB W12 ewezuga ihe ndị a niile, nwere nha obi kwa ụbọchị iji hụ ozi niile wee nwee ike ịhụ ihe egwu ọ bụla. Pedometer ga -egosi ozi dị na enyo, kamakwa n'ime ụlọ nwere usoro kwa ụbọchị, ije kilomita na kalori furu efu.
Nguzogide mmiri, ọkọ na ájá
E ji carbon rụọ ya, ihuenyo na -egosi ike iguzogide ncha, mana ọ bụghị naanị nke ahụ, ebe ọ nwere ike ịlanarị ịsacha aka kwa ụbọchị, nsị site na kemịkalụ kwa ụbọchị ma ọ bụ ọsụsọ, ọ na -ahụkwa na ọ na -agba mmiri.
Emebere ikpe elekere n'otu ibe, ka emechara ihe karịrị ọgwụgwọ iri nke ịchacha, ịchacha na eserese CNC. Ejikọtara ya na eriri silicone dị nro iji mee ahụ nwere nnukwu ekweghị ekwe na ncha nhịahụ, eriri ahụ na -adigide yana na -agbanwegharị.
IKIRU 1.32 inch HD nwere mkpebi pikselụ 360 x 360 / nhazi ihuenyo
Nhazi Realtel RTL8762C
Ọrụ Ihe nleba anya ụra / pedometer / nleba anya ọnụego obi / nha nha / nlele ikuku oxygen / ụdị egwuregwu 13
UMUAKA 330 mAh nke nwere oge ruru ụbọchị 30
Ò Kwekọrọ n'Ozizi Android 5.1 ma ọ bụ karịa - iOS 9.0 ma ọ bụ karịa
Ogologo oge X x 260 22 11 mm
Atụmatụ ndị ọzọ IP68 (nguzogide mmiri na uzuzu) / ngosi oku na -abata / ọkwa SMS na ọkwa ịgụ / ọkwa
IMILAB W12 smartwatch na -akwalite site na Ọktọba 11 ruo 15 site na njikọ a maka ọnụ ahịa $ 40,99 yana eriri efu maka ndị zụrụ otu nkeji. Ọ bụ nnukwu ohere n'ihi na ọnụ ahịa ya ga -abawanye karịa 50% site na Ọktọba 16.
IMILAB W12 na -ebuli ọgbọ ọgbọ n'elu ụdị W11, elekere elekere ọzọ nke onye nrụpụta IMILAB wepụtara. Nnwere onwe nke ụbọchị iri na anọ ruo ụbọchị iri atọ na ọnọdụ njikere ga -enye ya ohere ka ọ na -arụ ọrụ ma na -esonyere anyị n'ọnọdụ ọ bụla, ebe ọ dabara na mkpa ụbọchị niile n'ihi ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » IMILAB W12: jiri ohere nkwalite mmachi nke smartwatch a na -atọ ụtọ